Amin’ny alalan’ny fahatsiarovana iraisana ihany no azo tontosaina ny fahasalamana ara-tsaina ao Amerika Latina · Global Voices teny Malagasy
Misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina ny fifandirana tao amin'ny tantara
Voadika ny 15 Avrily 2021 5:12 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, English, Ελληνικά, русский, 日本語, عربي, Português, Español
Sary avy amin'ny tranombakoka “AMA y No Olvida” (“MITIAVA ary Aza Manadino”), Mozean'ny Fahatsiarovana manohitra ny Tsimatimanota any Managoa, Nicaragoa, nahazoana alàlana
Tena zava-dehibe any amin'ny faritr'i Amerika Latina ny adihevitra momba ny fahasalamana ara-tsaina noho ny tantaran'ny fifandirana ara-tsosialy sy politika, ireo hetsika ara-tsosialy nomelohina sy nenjehana, ny famenoana miaramila ny seha-piarahamonina, ny ady an-trano ary ny hetsika hafa. Ny ankamaroan'ny fiarahamonina Amerikana latina — raha tsy izy rehetra — dia afa-mandray anjara amin'ny fampiharana ny fahatsiarovana iombonana, satria mety haneho dingana iray lehibe hamerenana amin'ny laoniny ny mari-panondroana iombonana izany.
Mamela voka-dratsy goavana eo amin'ny fiarahamonina ny fifanolanana ara-tsosialy sy politika, ary tsy zavatra nisy fiantraikany teo amin'ny firenena fotsiny io taloha ela be na tamin'ny tantarany vao haingana. Mamela ratra izay matetika tsy azo sitranina ny famoizana ny tantaran'ilay olona iray manontolo, ny fianakaviana ary ny tantara iraisana—ary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy voatsabo akory aza. Vokatr'izany dia apetraky ny marina ofisialy, izay ajoron'ny “mpandresy”, ny mari-panondroana iraisana.
Mandresy lahatra i Maurice Halbwachs, frantsay psikôlôgy sady sôsiôlôgy, fa misy singa sosialy ilay rehetra antsointsika hoe tsiaro. Nohazavainy fa na dia ny tadidintsika manokana indrindra aza “dia mifandraika amin'ny fiainana ara-materialy sy ara-maoralin'ny fiarahamonina misy antsika. Ka raha miantehitra amin'izay oha-pitenenana izay dia tafiditra ao amin'ny tsiarontsika ka manana fiantraikany amin'ny maripanondroana iraisantsika ny fifandonana rehetra nanozongozona ny firenentsika.
Amin'ny toe-javatra izay manjaka ny famoretana, ny fisaonana, ary ny fametrahana ny sivana amin'ny tenany, iray amin'ireo teknika fampiasan'ny niharam-boina sy ilay nahavanon-doza ny fahanginana. Terena ny olona hampangina ny tsy fitovian-kevitra, ny fihetsiketsehana, ny heviny, ary miorina amin'izany, manangana ny endrika ofisialy tamin'izay zava-nitranga ny mpanao ratsy nefa tsy nihevitra ny tantaran'ireo niharam-boina.
Etsy ankilany, ny fitantarana ofisialy miainga avy amin'ny toeram-pahefana dia mba tontosain'olon-kafa te hahazo fahefana bebe kokoa ihany koa; avoakan-dry zareo indray ny kabary, na mamorona kabary vaovao ry zareo, izay manome tsiny ireo niharam-boina tamin'ny zavatra niaretany ary noho izany dia indroa nahita ny maizina toy ny tain'omby natsentsina lava-bary indray ireo niharam-boina nefa tsy fantany akory ny fijerin'ireo ny zava-nitranga.
Mampisy fisamahana tsikelikely izany toe-javatra izany, mampisara-bazana ny fiaraha-monina, ary manosika ho an-joron-kianja na mametraka ireo niharam-boina ho jiolahy aza. Izany, ohatra, no nitranga tany Nikaragoà tamin'ny taona 2018, raha napetraky ny fanjakana ho jiolahy ireo mpanao fihetsiketsehana nanohitra ny governemantan'i Daniel Ortega mba hanaratsiana ny fotokevitr'izy ireo. Niteraka ratram-panahy, tsy fitokisana ary mazava ho azy, alahelo tsy niala mihitsy nahazo ireo fianakaviana sy niharam-boina nandritra ny fandripaham-bahoaka tany Goatemalà izany.
Manome dikany marina ny tantarantsika
Rehefa miresaka momba ny filàna tsiaro iraisana, dia tsy hoe fanangonana torohay, kabary na hira izany. Ny tondroiko amin'izany dia ny fampisiana dikany indray ireo torohay mba ahafahana mampiditra tsikelikely izany amin'ny fiainantsika andavanandro ary manome dikany vaovao amin'ny toejavatra iray, na dia tsy nandray anjara mivantana tamin'izany aza isika.
Ohatra iray amin'izany ny fidiran'ny voanjo tamin'ny fanjanahantany: manohitra ny tantara ofisialin'ny voanjo ny vondrona indizeny sy ireo taranaka Afrikanina, manana ny mari-panondroany sy ny zava-niainany ara-tantara, ary manolotra fomba fijery hafa izay manova amin'izao fotoana izao ny hetsika iray izay fantatsika tamin'ny lasa, araka ny fanazavan'ilay antropology Nikaragoanina Maria José Díaz nandritra ny fifanakalozan-kevitra nifanaovako taminy tao amin'ny Instagram Live.
Araka ny Nikaragoaianina mpahay tantara sy mpikarotra Margarita Vannini tao amin'ny Instagram Live iray hafa, manome karazana fahamendrehana ho an'ireo niharam-boina tamin'ny toe-javatra nampisy ratram-panahy ny fanomezandika indray ny toe-javatra ara-tantara iray, ny fitantarana ny marina, ary ny tsy fitoviam-pitantarana avy amin'ny “lainga ofisialy” izay nanangana ny fanjakazakan'ny fanjakana. Satria tsy any an-takonana intsony ny fangirifiriana niaretana nandritra ireny toe-javatra ireny, mety hisy ny fankatoavam-piarahamonina ireny toe-javatra ireny. Avy amin'izany no isian'ny dingana voalohany mankany amin'ny fanatsarana ny fahasalamana ara-tsaina.
Tsy maintsy atsahatsika ny fanasokajiana ny niharam-boina ho izany ihany satria vahoaka nanana ny zony voahitsakitsaka ireny, tsy maintsy nangina ary hanohy ny fiainany tahaka ny hoe tsy nisy na inona na inona nitranga. Avy amin'izany dia toy ny mametraka azy hiharamboina indray mandeha ny fanaovana tsinontsinona ny voina nahazo azy ireo.
Tsy resaka fanekena famindrampo na marimaritra iraisana na fampihavanana izy ity. Tsy tokony iadiam-barotra ary tsy azo avela ny fikarohana ny marina raha tsy mandray andraikitra tamin'ny nataony ireo nanatontosa na nandray anjara tamin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona.
Politikan'ny famafana sy fampiasaina ho fitaovana ny tsiaro
Miharihary fa raha misy vondron'olona maro mitady tetipanorona hamelomana ny tsiaro iraisana, dia tadiavin'ny eo amin'ny fahefana ny hamafana izany fitantarana izany satria ny tanjony dia ny fanadinoana mba ho tokana sy tsy azo fafàna ny fijeriny.
Izany no mitranga any Nicaragua, izay ifikiran'ny fanjakana fa ny hetsi-panoherana tamin'ny taona 2018 dia fikasana hanongam-panjakana fa tsy fihetsiketsehana manohitra ny governemanta. Nolazain'ny mpikaroka Vannini fa tsy hahomby velively ny fanjakana amin'ny fanerena isian'ny fanadinoana amin'izao fotoana izao — ny ho vitany dia ny fametrahana politikam-panjakana amin'ny famafana hampisongadinana ny tantaran'ny mpandresy sy tsy hahitana ireo niharam-boina. Ohatra iray miharihary amin'ny politikam-pamafana ny fanesoran'ny fanjakana ao Nicaragua ireo lakroa eo amin'ny faribolana iray ao an-drenivohitra, Managua, izay napetraka teo ho fanomezam-boninahitra ny fahatsiarovana ireo tanora novonoin'ny polisy.
Etsy ankilan'izany, ireo eo amin'ny fahefana na te-ho eo amin'ny fitondrana kosa mamokatra indray na mizara fomba fijery iray tamin'ny zava-nitranga teo aloha sy ny fahatsiarovany. Ampiasainy amin'izany ireo niharam-boina (sisa niangana na tsia), ny tantaran-dry zareo, ny ratram-panahin-dry zareo mba hanondroany ny tenany ho “solontena” mendrika fanjakana noho ny tsikalakalam-pieritreretana ara-piarahamonin-dry zareo. Vao maika mafaitra kokoa ny nahazo ireo niharam-boina.
Tsiaro iraisana hahazoana fahasalamana ara-tsaina
Tsy mijanona amin'ny fotoana sy toerana iray tsy akory ny tsiaron'ny tsirairay sy ny tsiaro iraisana, fa mandeha hatrany hatrany ka azo faritana indray sy adika amin'ny fomba iray hafa. Tsy maintsy ampidirintsika ho fomba eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny fampahatsiarovana hisian'ny fankatoavan'ny fiarahamonina ireny toe-javatra ireny mba hanomezam-boninahitra ny mari-pnondroantsika nohitsikitsahana sy hiadiana amin'ny lainga terena ajoro ankaterena. Ohatra amin'izany fankatoavana izany ny 12 Oktobra “Andron'ny Fifaharana [fifandanana] Indizeny” fa tsy fetin'i Colombus, ny tambajotran-toeram-pahatsiarovana ao Amerika Latina sy Karaiba, na ny fisantarana andraikitra vao haingana, toy ny iray izay nampiroboroboan'ny Asociación Madres de Abril (ny fikambanan'ny “Renin'i Avrily”) ao Nicaragua.
Betsaka amin'ny fiarahamonina amerikanina latinina no manana toe-javatra mitondra famoizana sy fisaonana—maro no maharitra na tsy miala mihitsy—ary tontosa izany amin'ny alalan'ny fampanginana. Avy amin'izany isika tsy afa-mahatakatra ny toe-pahasalamana ara-tsaina ivelan'ny tantaran'ny tsirairay, izay tsy mety torontoronina ivelan'ny tantara iraisan'ny fiaraha-monina iainantsika.